Focus Times ‘प्लेन चढ्दा अचम्म लाग्यो’ :- Focus Times ‘प्लेन चढ्दा अचम्म लाग्यो’ :- Focus Times
‘प्लेन चढ्दा अचम्म लाग्यो’ :-
हामीलाई फुटबलका बारेमा केही पनि थाहा थिएन । जसरी हामी यो ठाउँमा आएका छौं, यो त कल्पनासमेत गरेका थिएनौं । यस्तो ठाउँमा आउँला भनेर न कहिल्यै सोचेका थियौं ।’
रारा टिमसँगै स्नेप आइपुगेकी मुगुकी किशोरी रोशनी कामीले आफ्नो अनुभव सुनाइन्- पहिले पहिले दाजुहरु फुटबल खेल्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरु केटी हौ, फुटबल खेल्नै जान्दैनौ जोडले हान्यो भने पनि ढल्छौं ।
एनआरएनए स्पेनले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा रोशनीले मुगुदेखि स्पेनसम्मको यात्राबारे आफ्नो अनुभन यसरी सुनाइन्-
बल देखेपछि मलाई डर लाग्थ्यो । टाढाबाट कसैले पावरले हान्छ कि भनेर पहिल्यै डराउँथे । बलले लागे नाकबाट रगत आउँछ, चोट लाग्छ भन्ने चिन्ताले नजिकै जान डर लाग्थ्यो । तर, पनि बिस्तारै दाजुहरुसँग सिकेँ । फुटबल खेल्न कहाँ जाँदैछन् भन्ने रेडियोबाट सुन्यौं । अलिअलि मात्रै फुटबल जानेकी थिएँ । तर, अभ्यासमा मैले धेरै नै मिहेनत गरेँ ।
छनोटमा परेपछि त एकदमै खुशी लाग्यो । तर, घरमा ममीबाबाले मान्नु भएन । केटी मान्छे, त्यही पनि अर्काको देशमा कतै बेचिदिन्छन् कि भनेर डराउनुहुन्थ्यो ।
स्पेन जस्तो ठाउँमा हाम्रा बाउबाजे त गएका थिएनन् । हामी केटी मान्छे, पहिलोपटक जाने अवसर पाएका छौं भन्दै घरमा सम्झाएँ । मैले अति नै जिद्दी गरेपछि मात्रै घरबाट निस्कन पाएकी हुँ ।
विदेशका लागि त हिड्यौं तर मनमा डर पनि थियो । पहिलो पटक प्लेन चढ्दा अचम्म लाग्यो । एकदमै डर लाग्यो । एकछिन त खुशी पनि लाग्यो । तर, झरी पो हाल्छ कि भनेर डर पनि ! कतै पहाडमा नै गएर ठोक्काउँछ जस्तो पनि । प्लेनमा एकदमै कान दुख्यो ।
हामी नेपालगञ्ज पुग्यौं । धेरै नै गर्मी थियो । त्यहाँबाट काठमाडौ आयौं। काठमाडौभित्र छिर्दा आफूलाई भाग्यशाली ठानें ।
यहाँ त आइयो । अब स्पेन कस्तो होला ? मनमा कस्तो कस्तो हुन्थ्यो । एकचोटि त मलाई विश्वासै लागेन । स्पेन जाने होइन कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । कतै उतै पो राख्ने हुन् कि भन्ने मनमा ठूलो डर पनि थियो ।
तर, आज मलाई स्पेनमा ठूला-ठूला घरहरु देख्दा, अझ मेस्सीजस्तो मान्छेले फुटबल खेल्ने ग्राउण्डमा पुग्दा, अनि यहाँ आएर खेल्न पाउँदा धेरै नै खुशी लागेको छ ।
कहिल्यै शहर पुग्ने सपनासम्म नदेखेकी रोशनी कामीको जस्तै अनुभव अन्य किशोरीहरुको पनि छ ।
सुनाकलीका १५ जना खेलाडीहरुमध्ये १३ जनाले त बालबिबाह नै गरे,’ टिम संयोजक भोजराज भाट भन्छन्- ‘अब नयाँ सुनाकली जन्माउनका लागि किशोरीहरुलाई यहाँ ल्याएका हांै । अब यी किशोरीहरुको पनि त्यस्तै दुर्भाग्य नहोस्।’
यसअघि सुनाकली बृत्तचित्र बनाएर अन्तराष्ट्रियस्तरमा नै चर्चा बटुलेका भाटले यसैको प्रभावले नै मुगुका किशोरीहरुलाई झन्डै करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डोनाष्टि कपको आयोजकले स्पेन निमन्त्रणा गरेको सुनाए ।
भाटले भने, ‘फुटबलको विश्व राजधानी शहरजस्तै लाग्ने बार्सिलोनामा मुगुका चेलीहरुलाई ल्याउँदा एउटा सपनाजस्तै लागिरहेको छ । फिफाले सुनाकलीलाई हिमालयन मेस्सी भनेको थियो । यी पनि १७ जना पनि मिनी मेस्सीहरु नै हुन् ।’
किशोरीहरुसँगै बार्सिलोना आइपुगेका भाट भन्छन्- ‘अब यिनीहरुले खेलकुदलाई निरन्तरता दिएर समाजको संकुचित घेरालाई तोड्न सके भने विश्वकप जितेसरह हुनेछ।’
विभिन्न उमेर समूहका किशोर-किशोरीले भाग लिने डोनाष्टि कपको उदघाटन एक भब्य समारोहवीच सोमबार साँझ सम्पन्न भएको छ । ३३ राष्ट्रका ६ सय २३ टिमहरु सहभागी हुँदा नेपालका तर्फबाट पहिलोपटक दुई टिमहरुले भाग लिए । मुगुका किशोरीहरुको टीम रारासहित काठमाडौको स्कोलर होम एकेडेमीका छात्रहरु पनि सहभागी भए ।
१३ बर्ष उमेर समूहका किशोरहरु बीचको फुटबल प्रतियोगतामा स्कोलर होम एकेडेमीले प्रतिस्पर्धा गरेको छ।
कुल ९ हजार ५ सय खेलाडीहरुले भाग लिएको प्रतियोगिताको उदाटन समारोहमा राष्ट्रिय झन्डा फरफराउँदै नेपाली खेलाडीहरुले मार्चपास गरे । ५२ जना नेपालीहरुको जम्बो टोली समारोहमा सहभागी बन्यो ।
जुलाई १ देखि ७ सम्म स्पेनको सान्सेबास्टियानमा प्रतियोगिता जारी रहनेछ ।
लर्ड्समा खेल्ने नेपाली टोलीः सुवास, विनोद र प्रदिपको...
विश्वकप क्वाटरफाइनलमा उरुग्वे र फ्रान्स तथा ब्राजिल ...
हृयारी केन : अस्वीकारले बनेका एक फुटबलर :-
स्विडेनविरुद्ध जर्मनीको कठिन जित, टोनी क्रुस बने नाय...
क्रोएसियाका लागि अर्जेन्टिना सहज प्रतिद्वन्द्वी !